Inqubomgomo Yobumfihlo - iFunlandia
Ku-funlandia.com, kufinyeleleka kusuka ku-www.funlandia.com, enye yezinto eziza kuqala kithi yimfihlo yezivakashi zethu. Le nqubomgomo yobumfihlo ibeka izinhlobo zolwazi oluqoqwa yi-funlandia.com futhi iluqophe, nokuthi silusebenzisa kanjani.
Uma unemibuzo eyengeziwe noma udinga ulwazi oluthe xaxa mayelana nenqubomgomo yethu yobumfihlo, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi.
Le Nqubomgomo Yobumfihlo isebenza kuphela emisebenzini yethu eku-inthanethi futhi isebenza kubavakashi bewebhusayithi yethu maqondana nemininingwane abayabelana ngayo kanye / noma abayiqoqa ku-funlandia.com. Le nqubomgomo ayisebenzi kulwazi oluqoqwe ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi noma ngeziteshi ezingeyona le webhusayithi.
Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uyavumelana nenqubomgomo yethu yobumfihlo futhi uyavumelana nemigomo yayo.
Imininingwane yomuntu ocelwa ukuba uyinikeze nezizathu zokuthi kungani ucelwe lolu lwazi uzokwenzelwa ukuthi ucacelwe lapho sifisa khona imininingwane yakho yangasese.
Uma usithinta ngqo, singathola imininingwane eyengeziwe ngawe, njengegama lakho, ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, okuqukethwe umlayezo kanye / noma izinanyathiselwa osithumela zona, kanye neminye imininingwane okhetha ukusinikeza yona.
Lapho ubhalisela i-akhawunti, singakucela imininingwane yakho yokuxhumana, kufaka phakathi izinto ezinjengegama, igama lenkampani, ikheli, ikheli le-imeyili, kanye nenombolo yocingo.
Silusebenzisa kanjani ulwazi lwakho
Sisebenzisa ulwazi esiluqoqayo ngezindlela ezahlukahlukene, kufaka phakathi:
Nikeza, usebenze futhi ugcine iwebhusayithi yethu
ukwenza ngcono, ukwenza ngezifiso nokwenza ngcono iwebhusayithi yethu
qonda futhi uhlaziye indlela oyisebenzisa ngayo iwebhusayithi yethu
thuthukisa imikhiqizo emisha, izinsizakalo, imisebenzi, nezici
ukuxhumana nawe ngqo
ukuthola nokuvikela ukukhwabanisa
funlandia.com ulandela inqubo ejwayelekile yokusebenzisa amafayela we-log. Lawa mafayela afaka izivakashi lapho evakashela amawebhusayithi. Zonke izinkampani zokubamba zenza lokhu futhi ziyingxenye yezinsizakalo zokubamba ze-analytics. Imininingwane eqoqwe ngamafayela e-log ifaka amakheli e-internet protocol (IP), uhlobo lwesiphequluli, i-Internet Service Provider (ISP), usuku kanye nesitembu sesikhathi, amakhasi akhomba / aphumayo, futhi mhlawumbe nenombolo yokuchofozwa. Lokhu akuxhunyanisiwe kunoma yiluphi ulwazi oluzokhomba wena uqobo. Inhloso yalolu lwazi ukuhlaziya izitayela, ukuphatha isayithi, ukulandelela ukunyakaza kwabasebenzisi abazungeze isayithi, nokuqoqa imininingwane yabantu.
Njenganoma iyiphi enye iwebhusayithi, i-fandlandia.com isebenzisa "amakhukhi." Lawa makhukhi asetshenziselwa ukugcina imininingwane, kufaka phakathi okuthandwa yizivakashi, kanye namakhasi esizeni isivakashi esifinyelele kuso noma esivakashele kuso. Imininingwane isetshenziselwa ukwandisa ulwazi lwabasebenzisi ngokwenza ngezifiso okuqukethwe kwewebhusayithi yethu ngokuya ngohlobo lwesiphequluli sezivakashi kanye / noma eminye imininingwane.
Ngemininingwane ejwayelekile mayelana namakhukhi, sicela ufunde "Ayini amakhukhi".
Imihlahlandlela Yokukhangisa Ubumfihlo Bozakwethu
Ungaxhumana nalolu hlu ukuthola Inqubomgomo Yobumfihlo yabalingani bokukhangisa be-funlandia.com ngayinye.
Qaphela ukuthi i-funlandia.com ayinakho ukufinyelela noma ukulawula lawa makhukhi asetshenziswa abantu besithathu.
Inqubomgomo Yemfihlo ye-Funlandia.com ayisebenzi kwabanye abakhangisi noma kumawebhusayithi. Ngakho-ke, sikweluleka ukuthi ubheke Izinqubomgomo Zobumfihlo eziqondene nalezi zinhlelo zezikhangiso ezivela eceleni ukuze uthole imininingwane ethe xaxa. Lokhu kungafaka phakathi imikhuba yabo nemiyalo yokuthi ungakhubaza kanjani izinketho ezithile.
Ungakhubaza amakhukhi ngokusebenzisa izinketho zakho zesiphequluli ngasinye. Imininingwane eningiliziwe yokuphathwa kwamakhukhi ngeziphequluli ezithile zewebhu ingatholakala kumawebhusayithi wesiphequluli afanele.
Amalungelo Obumfihlo e-CCPA (Ungathengisi imininingwane yami).
Ngaphansi kweCCPA, abathengi baseCalifornia banelungelo, phakathi kwamanye amalungelo:
Kudinga ukuthi ibhizinisi eliqoqa ulwazi lomuntu siqu lomthengi ludalule izigaba nezingxenye ezithile zolwazi lomuntu siqu ibhizinisi eliqoqiwe mayelana nabathengi.
Kudinga ukuthi ibhizinisi lisuse lonke ulwazi lomuntu siqu oluqoqwe ibhizinisi mayelana nomthengi.
Funa ukuthi ibhizinisi elithengisa imininingwane yomuntu siqu yomthengi lingathengisi imininingwane yomuntu siqu yomthengi.
Uma wenza isicelo, sinenyanga eyodwa yokuphendula kuwe. Uma ungathanda ukusebenzisa amanye alawa malungelo, sicela uxhumane nathi.
Amalungelo Wokuvikelwa Kwemininingwane ye-GDPR
Sifuna ukuqinisekisa ukuthi uyawazi wonke amalungelo akho wokuvikelwa kwedatha. Wonke umsebenzisi unelungelo lokulandelayo:
Ilungelo lokufinyelela - unelungelo lokucela amakhophi wedatha yakho yangasese. Singakukhokhisa imali encane ngalo msebenzi.
Ilungelo lokulungiswa kabusha - Unelungelo lokusicela ukuthi silungise imininingwane okholwa ukuthi ayilona iqiniso. Unelungelo futhi lokucela ukuthi sigcwalise imininingwane okholelwa ukuthi ayiphelele.
Ilungelo lokusula - Unelungelo lokucela ukuthi sisule imininingwane yakho yangasese ngaphansi kwezimo ezithile.
Ilungelo lokukhawulela ukucubungula - unelungelo lokucela ukuthi sikhawulele ukucubungula imininingwane yakho ngaphansi kwezimo ezithile.
Ilungelo lokwenqaba ukucubungulwa - Unelungelo lokusiphikisa ukucubungula imininingwane yakho ngaphansi kwezimo ezithile.
Ilungelo lokuthwalwa kwedatha - unelungelo lokucela, ngaphansi kwemibandela ethile, ukuthi sidlulisele imininingwane esiyiqoqa kwenye inhlangano noma ngqo kuwe.
Uma wenza isicelo, sinenyanga eyodwa yokuphendula kuwe. Uma ufisa ukusebenzisa noma yiliphi lala malungelo, sicela uxhumane nathi.
Enye into ebaluleke kakhulu kithi ukuvikela izingane lapho zisebenzisa i-Intanethi. Sikhuthaza abazali nabaqaphi ukuba babheke, babambe iqhaza, futhi / noma bagade futhi baqondise imisebenzi yabo eku-inthanethi.
I-funlandia.com ayiqoqi ngamabomu imininingwane yomuntu siqu ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-13. Uma ucabanga ukuthi ingane yakho inikeze lolu hlobo lwemininingwane kusayithi lethu, sikukhuthaza ngokuqinile ukuthi uxhumane nathi ngokushesha futhi sizokwenza konke okusemandleni ethu ukususa lokho ngokushesha imininingwane evela kumarekhodi ethu.
Copyright 2010-2021 funlandia.com Wonke Amalungelo Agodliwe. Hot ProductsIbalazweDlala Izinsiza Zezingane, Izindleko Zasendlini Yokudlala Yangaphakathi, Izinsiza kusebenza ze-Adventure Indoor Playground, IBig Air Trampoline Park Franchise, Ukwenziwa kweTrampoline Park, Izingane Zabakhiqizi Bendawo Yokudlala,